नेपालमा कहिले छापिएला सी चिनफिङको लेख? - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
नेपालमा कहिले छापिएला सी चिनफिङको लेख?
लक्ष्मी लम्साल बेइजिङ पुस ७
हिमालपारीको देश, नदी र पहाडले जोडिएका देश वा यस्तै यस्तै विशेषण सहित नयाँ वर्षमा सी चिनफिङको लेख नेपाली संचारमाध्यममा कहिले छापिने हो, त्यो व्यग्र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१८ मा नेपाल बाहेक १३ देशको भ्रमण गरे। मार्चमा चीनका दुई ठूला अधिवेशन भएकाले सी आफ्नो विदेश रफ्तार केही कम गर्दै चार पटक मात्रै यात्रामा निस्किए। त्यसमा एशिया, अफ्रिका, युरोप, ल्याटिन अमेरिका र ओसेनिया गरी १३ मुलुक समेटिए।
गत नोभेम्बर २७ देखि डिसेम्बर ५ सम्म उनले स्पेन, अर्जेन्टिना, पानामा र पोर्चुगलको भ्रमण गर्नुका साथै तेह्रौं जी–२० सम्मेलनमा पनि भाग लिए। सीले पारगमनका क्रममा मौरिससको पनि मैत्रीपूर्ण ट्रान्जिट भ्रमण गरेर रसियामा इस्टर्न इकोनोमिक फोरम पनि भ्याए। उनले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), सेनेगल, रूवाण्डा, दक्षिण अफ्रिका, पपुआन्यूगिनी, ब्रुनाइ र फिलिपिन्सको भ्रमण गरे। दक्षिण अफ्रिकामा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा पनि भाग लिए।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले विदेशको भ्रमण गर्दा सबैभन्दा पहिला उनको हस्ताक्षर सहित लेख प्रकाशित हुने गर्छ। जुन देशको भ्रमण गर्नुछ, त्यसको पूर्वसन्ध्यामा सीको लेख सम्बन्धित देशका मुलधारका मिडियामा अग्रिम पुगिसक्छ। जुन चौतर्फी चासोको विषय बन्ने गर्छ। सम्बन्धित देशसँगको इतिहास र वर्तमानको सम्बन्ध र सहयोग, रणनीतिक साझेदारी, जनस्तरीय सम्बन्ध, शिक्षा, संस्कृति, व्यवसाय लगायतका विषय समेटिने गरेको उनका केही लेखको विश्लेषणबाट चाल पाइन्छ।
सन् २०१८ को १८ जुलाईमा सीले पहिलो विदेश भ्रमण संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट थालेका थिए। उनी अबुधावी ओर्लिनुअगावै त्यहाँका सर्वसाधारण स्थानीय पत्रपत्रिका र संचारमाध्यम अघिल्तिर झुम्मिन थालिसकेका थिए। ‘भविष्य सिर्जनाका लागि सहकार्य’ विषयक सीको लेख हस्ताक्षर सहित प्रकाशित भएको थियो। लेखमा उनले सन् २००८ को सछ्वान भूकम्पका बेलामा यूएईको ५० मिलियन डलरको सहयोग बिर्सिएनन्।
अर्जेन्टिना भ्रमणको बेला २८ नोभेम्बरमा सीले त्यहाँका संचारमाध्यममा ‘चीन–अर्जेन्टिना नयाँ युग’ बारे एउटा लेख जारी गरे। चीन–अर्जेन्टिना दूरीका हिसाबले निकै टाढा भएपनि दुबै शान्तिप्रिय देश भएको उल्लेख गरे। उनी सम्बन्धित लेखमा सम्बन्धित देशको प्रवृत्तिबारेमा पनि अनुसन्धान गर्ने गर्दछन्। चीनसँग मिल्दो व्यहोरा के कस्तो छ, सो देशलाई पनि जोड्ने गर्दछन्। चीन अहिले आफ्नो सपना साकार तुल्याउन संघर्षरत छ, जब कि अर्जेन्टिना पुनरूत्थानका लागि प्रयासरत छ। ‘हातमा हात मिलाएर नयाँ युगमा दुईपक्षीय सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ, ताकि दुबै देशका जनताले समान लाभ हासिल गर्न सकून्’ भनेर सीले आफ्नो न्यानो स्वागतका लागि अर्जेन्टिनी जनताको मन जित्ने प्रयास गरे।
रूवान्डाको राजकीय भ्रमणताका सीले ‘नयाँ युग’ समाचारपत्रमा ‘चीन–रूवान्डाको भावना पहाडभन्दा अग्लो’ शीर्षकको लेख प्रकाशित गरे। लेखमा उनले चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षको तर्फबाट आजमसम्ममा पहिलो रूवान्डा भ्रमण हुन लागेको बताए। जसबाट आफूले ठूलो अपेक्षा राखेको पनि राष्ट्राध्यक्ष सीले औँल्याए।
रूवाण्डाजस्तो पिछडिएको मुलुकबाट पनि चीनजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले अपेक्षा गरिदिएबाट रूवाण्डावासीको चित्त हरेको हुनुपर्छ। सन् १९७१ मा चीन तथा रूवान्डाबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको हो। हाल ‘भिजन २०२०’ विकास योजनाको कार्यान्वयनमा रूवान्डा लागिपरेको छ भने चीन ‘२ वटा शताब्दी’ को लक्ष्यलाई साकार तुल्याउन प्रयासरत छ। चीन तथा रूवान्डाबीचको सहयोगको भविष्यमा इतिहासमा नभेटिने विकास अवसर देखा परेको भनेर सीले रूवाण्डालाई पुलपुल्याए। चीन–रूवान्डाबीचको मित्रता नै चीन–अफ्रिकी मुलुकबीचको मित्रताको प्रतीक हुने भनेर सीले त्यहाँ भ्रमण गर्नुको स्पष्ट उपलब्धी पहिल्याउन खोजे।
पानामाको राजकीय भ्रमणअघि सी चिनफिङले ‘हातमा हात मिलाएर अघि बढ्नुका साथै मिलीजुली भविष्य सिर्जना गरौं’ शीर्षकको नाम सहितको लेख प्रकाशित गरे। आफ्नो लेखमा उनले पहिलो पटक पानामाको राजकीय भ्रमण गर्न लागेको र चीनका राष्ट्राध्यक्षले गर्ने पहिलो भ्रमण भएकाले व्यग्र प्रतीक्षा सुनाए। गत वर्षको जुन महिनामा चीन र पानामाबीच औपचारिक रुपमा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो।
सेनेगलका मिडियामा पठाएको लेखमा उनले सन् २०१३ मा ‘पर्सेसिभ चाइना’ विषयक चीनले संचालन गरेको ज्ञानविज्ञान प्रतियोगितामा साढे २ लाख प्रतिष्पर्धीलाई पछि पारेर उपाधि जित्ने एक ६५ वर्षीय सेनेगलका बुढाको सम्झना गरे।
पपुवान्यूगिनीमा छापिएको लेखमा उनले फुच्यान प्रान्तको गभर्नर हुँदाको १८ वर्षअघिको आदानप्रदानको घटना स्मरण गरे। घाँसे मैदान तथा सुख्खा धान रोपाइँ प्रविधि सहयोगबाट चीनको अर्थतन्त्र र सामाजिक फाइदामा योगदान पुगेको बताए। ब्रुनाइ सम्बन्धित लेखमा पनि उनले इतिहासको आदानप्रदानबारे उल्लेख गरे। फिलिपिन्सका सम्बन्धमा उनले ६०० वर्षअघि एकजना माझीले मनिलासम्म डुंगा खियाएर यात्रा गरेको स्मरण गरे। स्पेनलाई उनले भरपर्दो साझेदारको उपमा दिए। साउथ अफ्रिकामा मण्डेलाको उद्गार उद्धृत गर्दै लेख निकाले।
वर्षको अन्तिम भ्रमण चाहिं डिसेम्बर ३ मा पोर्चुगलमा थियो। पोर्चुगलको न्यूज डेलीमा सीले ‘समय र स्थानपार मित्रता तथा भविष्य उन्मुख साथी’ विषयक लेख जारी गरे। उनी त्यहाँ भ्रमणमा निस्किँदा दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ४०औं वार्षिकोत्सव आउन २ महिना मात्रै बाँकी थियो।
विश्वको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र र विश्वशान्तिका लागि महत्वपूर्ण योगदानकर्ता मुलुकको अभिभावकीय भूमिका देखाउन चिनियाँ राष्ट्रपतिले विश्वको भ्रमण गरिरहेका हुन्छन्। ती भ्रमणहरूमा उनले भविष्यमा सहकार्यका लागि दरिलो प्रभाव पनि छाड्ने गर्दछन्। त्यति मात्रै हैन, उनले विगतमा आफूले भ्रमण गरेका मुलुकका नेताहरूसँग विगतमा भएको भ्रमण र समझदारीको पनि पुनःताजगी गराउँछन्। जस्तो उनले सम्बन्धित देशमा फोन गर्छन्, सम्बन्धित देशका प्रतिनिधिलाई बोलाएर भेट्छन् वा अन्य कुनै तरीका प्रयोग गर्छन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले आफ्नो गन्तव्य मुलुकमा प्रवेश गर्नुपूर्व जारी गर्ने लेखमा कुनै न कुनै विशेषता पनि हुन्छ। जस्तो कि उनी जुन देशमा गएपनि द्विपक्षीय दौत्य सम्बन्धको कुरा छुटाउँदैनन्। उनलाई सम्बन्धित देशको भौगोलिक अवस्थितिप्रति पनि रूचि हुन्छ। दुवै देशबीचमा विश्वास, सम्मान र समर्थनको भावनाबाट साझा जीतका लागि दुबै देशले प्रयास गरेको भन्ने वाक्य पनि उनको लेखमा पर्नेगर्छ। उनले सम्बन्धित देशको विकासको मोड के कस्तो छ भन्ने पनि हेक्का राख्ने गर्छन्।
अचेल सीले आफ्नो लेखमा रणनीतिक साझेदारी सम्बन्ध, विकासका प्रचूर संभाव्यता, उज्ज्वल भविष्य, मानव जातिको भाग्य समुदायको स्थापना, विश्वसामु देखिएका साझा चुनौती, हातमा हात मिलाउँदाका फाइदा, सरकार तथा जनताबीचको पारस्परिक सम्बन्ध र चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्सको मुद्दा पर्ने गरेको छ।
यस वर्ष २०१८ मा पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको संभावना टुंगिएको छ। सन् २०१९ संघारमा छ। जुन नयाँ चीन स्थापनाको ७०औं वर्षगाँठका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण हो। नेपालबाट चीन आइपुगेका जो कोही नेताहरूले सीको नेपाल भ्रमणको कुरो चुहाउने गरेका छन्। नेपाल गएका चिनियाँ नेताहरूले पनि उस्तै कुरोले कान भरेका छन्। दुबैतर्फका दूतावासहरू पनि प्रयासरत छन्।
त्यसैले हिमालपारीको देश, नदी र पहाडले जोडिएका देश, सर्वकालिक मैत्रीपूर्ण छिमेकी वा यस्तै यस्तै विशेषण सहित नयाँ वर्षमा सी चिनफिङको लेख नेपाली संचारमाध्यममा कहिले छापिने हो, त्यो व्यग्र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।
प्रकाशित ७ पुस २०७५, शनिबार | 2018-12-22 16:10:55
नेपालले लाभ लिनसक्ने चीनको यो ‘च्वाँचे’ अर्थतन्त्र
तिब्बत सरकार प्रमुखको प्रतिवेदनः यसै वर्ष तातोपानी नाका पुनः संचालन